मितेरी डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयर खरीद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेरौ आर्थिक र प्राविधिक विश्लेषण : | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर मितेरी डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयर खरीद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेरौ आर्थिक र प्राविधिक विश्लेषण :
on: September 05, 2018 मुख्य खबर, लगानी
देशका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका पूँजीलाई सङ्कलन गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रहरुमा लगानी गरी देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजीक स्तर उकास्न टेवा पुर्‍याउने उदेश्यले यस मितेरी डेभलपमेण्ट बैङ्कले हाल केन्द्रिय कार्यालयसहित १७ ओटा कार्यालयबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । धरानको निजी क्षेत्रको पहिला विकास बैङ्कको रुपमा स्थापित यस बैङ्कले छोटो समयमानै समस्त पूर्वाञ्चलवासीहरु माझ विश्वसनीय बैङ्कको रुपमा आफूलाई परिचित गराएको छ । नयाँ नयाँ व्यवसायीक योजनाको विकास, लगानीका क्षेत्रहरुको खोजी, व्यवसाय विविधीकरण तथा गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्दै बचतकर्ताको बचतको उच्च सुरक्षाका साथ शेयरधनिहरुलाई उचित प्रतिफल प्रदान गर्ने नीति बैङ्कले लिएको छ । हाल रू. ५० करोड चुक्तापूँजी रहेको यस बैङ्कको जगेडा कोषमा रू. १९ करोड ९३ लाख ४३ हजार रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमासमा बैङ्कले रू. ११ करोड २९ लाख ७३ हजार नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा बैङ्कले रू. १२ करोड ११ लाख ६० हजार नाफा गरेको थियो । गत वर्ष सञ्चालन नाफा करीब ५ प्रतिशतले घटेकाले पनि नाफा घटेको देखिन्छ । गत वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा २ सय ६ प्रतिशत बढी सम्भावित जोखिम शीर्षमा रकम छुट्याएको बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा शून्य रहेको थियो ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. २८४
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. १३२६
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. २५०
१८० दिनको भारित औसत मूल्यः रू. २९४.५७
अध्यक्षः अजित नारायण सिंह थापा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः तुलसी प्रसाद वस्ती
प्रधान कार्यालयः महेन्द्रपथ, धरान
स्टक सङ्केतः एमडिबि
कम्पनीको चालू आवको चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दाः
गत आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमासमा बैङ्कले रू. ३ अर्ब ८१ करोड ४२ लाख ८८ हजार निक्षेप सङ्कलन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा रू. २ अर्ब ८८ करोड ९१ लाख ७० हजार निक्षेप सङ्कलन गरेको थियो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत चौंथो त्रैमासमा करीब ३६ प्रतिशत बढी रू. ३ अर्ब ८ करोड ९२ लाख ३४ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा रू. २ अर्ब २७ करोड ५३ लाख ४२ हजार कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।
लगानीमा गत वर्ष राम्रो प्रगति गरेको छ । बैङ्कले अघिल्लो वर्षभन्दा २२ गुणा बढी रू. १ करोड ४ लाख ७१ हजार लगानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष रू. ४ लाख ७१ हजार मात्र लगानीमा रहेको थियो ।
चौंथो त्रैमासमा रू. ४९ करोड १३ लाख १७ हजार ब्याज आम्दानी गरेको बैङ्कले रू. २८ करोड १६ लाख ८४ हजार ब्याजमा खर्चिएको छ । बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी शून्य दशमलव ८५ प्रतिशतले कम भएको छ ।
कुल सञ्चालन आम्दानी रू. २५ करोड ६६ लाख ७९ हजार भएको बैङ्कले कर्मचारीका लागि रू. ४ करोड २९ लाख ३५ हजार खर्र्चिएको छ ।
बैङ्कको स्थिर सम्पत्ति रू. ३ करोड ४१ लाख ५० हजार र अन्य सम्पत्ति रू. ३ करोड २० लाख ८० हजार रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्थिर सम्पत्ति ४५ प्रतिशत र अन्य सम्पत्ति १९ प्रतिशतले बढेको छ ।
पूँजीकोष लागत ९ दशमलव ८७ प्रतिशत र पूँजीकोष पर्याप्तता २० प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष सम्भावित जोखिम शीर्षकमा रू. २७ लाख ५८ हजार छुट्याएको बैङ्कले गत वर्ष रू. ८४ करोड ४५ लाख छुट्याएको छ ।
चौंथो त्रैमासमा वित्तीय विवरण अनुसार बैङ्कको मूल्य आम्दानी अनुपात १७ दशमलव ७५ प्रतिशत, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. ९ सय १४ दशमलव १८, तरलता अनुपात ३६ दशमलव ८३ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ३९ दशमलव ८६ रहेको छ । बैङ्कको बुधवार भएको शेयर कारोबारमा अन्तिम मूल्य रू. २ सय ८४ कायम भएको छ ।
प्रतिशेयर लाभांश(गत वर्ष)/प्रति शेयर बजार मूल्य ×१००
बुधवार भएको शेयर कारोबार विवरण
६ जुन २०१८ ५ सेप्टेम्बर २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः बैङ्कको ६० दिनको कारोबार अवधिमा अन्तिम दिन सेता ओपनिङ मारुबोजु आकृति भएको मैनबत्ति बनेको छ । यस्तो आकृतीले कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआईः कम्पनीको ६० दिनको कारोबारमा आरएसआई न्यूट्रल जोन ( ५८ दशमलव ९६ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीका ६० दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ६ दशमलव २९ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य छ ।
मुभिङ एभरेजः कम्पनीको ६० दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग नजिकिन खोजेका छन् । हालको मूल्य १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्य रेखाभन्दा माथि छ । हालको मूल्य रू. २ सय ८४ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महङ्गिएमा रू. २ सय ८७ मा प्रतिरोध र मूल्य सस्तिएमा रू. २ सय ६२ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
मितेरी डेभलपमेण्टको नाफा २ करोड ५६ लाख
मितेरी डेभलपमेण्टको १७ प्रतिशत बोनस प्रस्ताव